Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.2 Na-aga n'ihu
Nke mbụ, nchịkọta data mgbe niile na-enyere ndị nchọpụta aka ịmụ ihe ndị a na-atụghị anya ha n'ụzọ ndị na-agaghị ekwe omume ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eme nchọpụta nwere mmasị n'ịmụ akwụkwọ mmegharị anya Occupy Gezi na Turkey n'oge okpomọkụ nke afọ 2013 ga-elekwasị anya n'àgwà ndị mkpesa n'oge ahụ. Ceren Budak na Duncan Watts (2015) nwere ike imekwu ihe site n'iji ụdị Twitter mee ihe mgbe nile iji mụọ ndị mmegide na-eji Twitter tupu, n'oge, na mgbe ihe omume gasịrị. Na, ha nwere ike ịmepụta ìgwè ndị na-abụghị ndị na-eso ụzọ tupu oge, n'oge, na mgbe ihe omume ahụ gasịrị (nọmba 2.2). N'ozuzu ha, ụlọ ọrụ ha na-esote ndị ọzọ gụnyere mmadụ 30,000 karịrị afọ abụọ. Site n'ibuli ihe omuma ndi eji eme ihe site na mkpesa site na ozi ndi ozo, Budak na Watts nwere ike imuta ihe kariri: ha nwere ike ilee ihe ndi mmadu ga-esonye na mkpesa Gezi ma kwue mgbanwe na omume nke ndị na-abụrụ na ndị na-abụghị ndị na-anọghị na ya, ma n'oge mkpirikpi (iji atụnyere Gezi ruo n'oge Gezi) na ogologo oge (iji atụnyere Ge-Gezi na post-Gezi).
Nkeji 2.2: Ekeji nke Budak and Watts (2015) na-amụ banyere mmegharị mkpesa Occupy Gezi na Turkey n'oge okpomọkụ nke afọ 2013. Site na iji Twitter mee ihe, ndị na-eme nchọpụta mere ihe ha na-akpọ otu ọkwá mbụ nke gụnyere 30,000 mmadụ karịrị afọ abụọ. N'adịghị ka nchọpụta a na-ahụkarị bụ ndị lekwasịrị anya na ndị na-ekere òkè n'oge mkpesa ahụ, ọkwa nke mbụ na - agbakwunye 1) data site na ndị na - abata tupu na mgbe ihe omume na 2) data site na ndị na - abụghị ndị bịara tupu tupu oge, n'oge, na mgbe ihe omume gasịrị. Ngwuputa usoro ihe omuma a nyere Budak na Watts aka ichoputa ihe ndi mmadu nwere ike itinye aka na nti iwe Gezi na igosi mgbanwe nke ndi mmadu na ndi na-abughi ndi ozo, ma na okwu mkpirisi (dika ndi Gezi na Gezi ) na ogologo oge (iji atụnyere pre-Gezi na post-Gezi).
Onye nwere obi abụọ nwere ike ịkọwa na ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị a nwere ike ịbụ na-emeghị mgbe niile - na nchịkọta data (dịka, atụmatụ ogologo oge nke mgbanwe mgbanwe), nke ahụ ziri ezi, ọ bụ ezie na nchịkọta data dị otú ahụ maka mmadụ 30,000 gaara abụ ezigbo ọnụ. Ọbụna enye m ego a na-akparaghị ókè, Otú ọ dị, enweghị m ike icheta usoro ọ bụla ọzọ nke na-enye ndị na-eme nchọpụta ohere ịlaghachi azụ n'oge na-elezi anya na-eme ka ndị na-eme ihe omume na-eme n'oge gara aga. Ihe ọzọ kachasị mma ga-abụ nakọtara akụkọ banyere akparamàgwà, ma akụkọ ndị a ga-abụ njedebe ma ọ bụ eziokwu. tebụl 2.1 na-enye ihe atụ ndị ọzọ nke ọmụmụ ndị na-eji ihe ọmụma data na-aga n'ihu iji mụọ ihe omume a na-atụghị anya ya.
Isiokwu nke 2.1: Nnyocha nke ihe ndị a na-atụghị anya ya site na iji isi mmalite data.
Ihe a na-atụghị anya ya
Ebe nchekwa data mgbe nile
Occupy Gezi ije na Turkey Twitter Budak and Watts (2015)
Mkpesa ndị nche na Hong Kong Weibo Zhang (2016)
Mgbapụ ndị uweojii na New York City Akụkọ nkwụsị-na-frisk Legewie (2016)
Mmadụ iso ISIS Twitter Magdy, Darwish, and Weber (2016)
September 11, 2001 ọgụ livejournal.com Cohn, Mehl, and Pennebaker (2004)
September 11, 2001 ọgụ ozi pager Back, Küfner, and Egloff (2010) , Pury (2011) , Back, Küfner, and Egloff (2011)
Na mgbakwunye na ịmụ ihe ndị a na-atụghị anya ya, mgbe niile, na-eme ka ndị na-eme nchọpụta nwee ike ịmepụta oge n'eziokwu, nke nwere ike dị mkpa na ebe ndị na-eme iwu-na gọọmentị ma ọ bụ ụlọ ọrụ-chọrọ ịzaghachi dabere na ịmawanye ọnọdụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji data data mgbasa ozi na-eduzi mmeghachi ihe mberede maka ọdachi ndị na-emere onwe ha (Castillo 2016) na ụdị nnukwu data dịgasị iche iche dị iche iche nwere ike ịmepụta oge atụmatụ akụ na ụba (Choi and Varian 2012) .
N'ikpeazụ, usoro data na-enyere ndị nchọpụta aka ịmụ ihe ndị a na-atụghị anya ya ma nye ndị na-eme iwu iwu oge. Otú ọ dị, echeghị m na usoro nchekwa data mgbe niile dị mma maka mgbanwe nsụgharị ogologo oge. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ usoro data buru ibu na-agbanwe agbanwe mgbe nile-usoro m ga-akpọ na- agagharị n'ọdịnihu na isi (ngalaba 2.3.7).